जहाँ ज्यूँदो भूतले सुनाउँछ फैसला ! | KTM Khabar
जहाँ ज्यूँदो भूतले सुनाउँछ फैसला !
२०७४ बैशाख २४ गते १६:०४ मा प्रकाशित
२४ बैशाख । के तपाइँले कहिल्यै भूत देख्नुभएको छ ? नदेखेपनि भूतका कुरा त प्रसस्तै सुन्नुभएको छ होला । तर सायद ज्यूँदो भुतका बारेमा चाहीँ सुन्नुभएको छैन होला ।
पश्चिम अफ्रिकाको एउटा सानो देश बेनिनमा ज्यूँदो भुत पाइन्छ । बेनिन यस्तो देश हो जहाँबाट अप्रिmकी कालो जादू बुडुको सुरुवात भएको थियो । यहाँका इगुनगुन समुदायका मानिसहरुलाई ज्यूँदो भूत भनिन्छ । आम धारणा अनुसार यो समुदायका मानिसहरुले अन्य समुदायका मानिसहरुलाई छोएरै मारिदिन सक्दछन् । उनीहरुले जसलाई छुन्छन् त्यसको मृत्यु हुन्छ ।